Ahoana no ataoko mifantoka amin'ny fifamoivoizana amin'ny bilaogiko? | Fifamoivoizana hiara-miasa
by Beverly Little on Enga anie 11, 2021
Ahoana no ataoko tanjona Traffic Ao amin'ny bilaogiko?
Fantatrao ny mombamomba anao manokana ary nanomboka namorona tranokala bilaogy manampy sy manampy ianao, izay manatsara ny fahaizanao mamaky teny sy manaraka. ny fifamoivoizana ny statistika dia jereo ihany koa tsia. Tokony ho azonao fa mila mikendry ianao fifamoivoizana!
09/23/2021 10:51 maraina GMT
Matetika, mpanoratra bilaogy, indrindra ireo izay tsy dia miraharaha loatra ny fifamoivoizana statistika, tsy mahalala momba ny fomba hahazoan'izy ireo ilay antsoina hoe fifamoivoizana. Betsaka ny mpanoratra bilaogy no tsy miankina amin'izao fotoana izao momba ny votoatin'ny fanaovana fifamoivoizana sy ny fomba manampy amin'ny fivelomana an-tserasera. Misy antony ampy hahatonga anao ho taitra rehefa tsy misy miraharaha izay zavatra zahanao.
fitorahana bilaogy mety ho Asset
Raha mavitrika amin'ny fitorahana bilaogy, azonao atao tsara ny manatanteraka ny ezaka ataonao ary mampalaza azy io. Raha azonao fotsiny izay antenainao hatao, dia azonao atao ny mampiroborobo ny tenanao ary avy eo mamokatra manaraka.
Ny ahiahy eto dia ny fomba ahafahanao mamoaka fifamoivoizana amin'ny tranokalanao? Ataovy ao an-tsaina fa be dia be ny fifamoivoizana no ilainao hahomby amin'ny tranokalanao. Mba hamadihana ny fahitanao ho lasa fahombiazana sy ezaka malaza dia tadidio ao an-tsaina ireo sosokevitra ireo.
Manaova karazana mpikambana mailaka ho an'ny tranonkalanao voaomana rehetra. Mila fandraisana olona tsirairay ao amin'ny tambajotrao hisoratra anarana. Azonao atao ny manomboka amin'ny havanao, mpiara-miasa aminao, mpanjifanao, mpiara-miasa aminao ary namanao tsara.
Mamaky, manaraka ary miresaka momba ireo bilaogin'olon-kafa izay ao anatin'ny akany manokana kendrenao. Ataovy azo antoka ny mamorona fanamarihana mahasoa, ilaina ary mahira-tsaina satria hitaratra ny anao izy ireo fitorahana bilaogy fahaiza-manao. Raha mahaliana anao ny hafa, dia mety hanaraka ny rohy mankany amin'ny asanao izy ireo.
Ampiasao ny fiasa Ping-O-Matic amin'ny tranokala lahatahiry tranokala bilaogy isaky ny manafaka ianao.
Alefaso any amin'ny motera fikarohana an-tserasera sy tranokala mirakitra tranokala bilaogy ny tranonkalanao. Betsaka amin'izy ireo no tonga maimaimpoana ankehitriny.
Aza adino ny mampiditra ny rohy mankamin'ny tranonkalanao amin'ny rakitra sonia e-mail omenao.
Omeo hatrany ny rohy eo amin'ny pejin'ny tranokalanao na amin'ny gazety rehetra atolotrao ary avoaka. Ataovy amin'ny karazana taratasy rehetra izay vokarinao.
Raha mampiasa brochure, varotra fanompoana ary ravin-taratasy ho an'ny teknika marketing ianao dia ataovy izay hanontana ny URLn'ny tranokalanao.
Milamina ny fananana URL RSS RSS ahafahan'ny olona misoratra anarana haingana.
Aza adino ny mamoaka fanavaozana ny tranokalanao mba hisarika ny mpanjifa bebe kokoa.
Ny fampidirana ireo hevitra ireo amin'ny regimenanao dia hanampy anao betsaka amin'ny fampiroboroboana ireo bilaoginao. Tsy izany ihany fa na izany aza, mahazo mikendry ny fifamoivoizana ianao!
Fantatrao ny fonosanao manokana ary nanomboka namorona tranokala bilaogy mahasoa sy mahasoa ianao izay tena tsara fa hisarika ny mpamaky sy hanaraka. Ny ahiahy eto dia ny fomba ahafahanao mamoaka fifamoivoizana amin'ny tranokalanao blog? Ataovy ao an-tsaina fa ny habetsahan'ny fifamoivoizana dia ny zavatra ilainao mba hahomby amin'ny tranokalanao. Manaova karazana mpikambana mailaka ho an'ny tranonkalanao voaomana rehetra. Vakio, araho ary fanehoan-kevitra amin'ny tranokalan'ny olon-kafa izay ao anatin'ny akany voafaritrao manokana.
09/23/2021 10:50 maraina GMT
Filed Under: fitorahana bilaogy, Targeted Traffic